true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 8 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Ukuhlela kubaluleke kakhulu futhi kunolwazi oluningi ngakho. Enye yamaphuzu abalulekile ukuthi noma yiluphi uhlelo lunezingxenye eziningana. Lezi zingxenye kufanele zihlanganiswe ndawonye ngendlela ehlelekile kungenjalo uhlelo ngeke luphumelele. Le eminye yezimiso ephathelene nezinhlelo.
Nansi eminye imithetho ebalulekile okufanele uyazi mayelana nezinhlelo:
I-Maxim yokuQala: Noma yimuphi umbono (isiphakamiso noma icebo) ungcono ukungabi nombono nhlobo, noma ngabe awukenziwa kahle (fakwa esenzweni).
I-Maxim yesiBili: Ukuze isebenze, uhlelo kumele lwenziwe.
I-Maxim yesiThathu: Uhlelo obelusetshenzisiwe kumele lusetshenziswe lungazitshwa.
I-Maxim yesiNe: Uma ngabe awunaso isikhathi sokusebenza kuhlelo, ungaqali ukukwenza bese ungakunaki. Esikhundleni salokho, yenza okuningi kwezinye izinhlelo osuvele usebenzela kuzo.
I-Maxim yesiHlanu: Noma yiluphi uhlelo ludinga imali ethile. Ngakho-ke ngaphambi kokuthi uqale ohlelweni, yiba nemali noma wazi ukuthi uzoyithola kanjani—noma qiniseka kakhulu ukuthi uhlelo luzoletha imali.
I-Maxim yesiThupha: Uhlelo kufanele luhanjelwe ngumuntu noma kungenjalo luzonganakwa futhi luphulwe futhi alusoze lwaphela.
I-Maxim yesiKhombisa: Uhlelo oluhle kakhulu yilona oluzofinyelela inani elikhulu kakhulu labantu, imindeni, amaqembu, njll, futhi luzokwenzela okuhle kakhulu ngenani elikhulu kakhulu labantu, imindeni, amaqembu, njll.
I-Maxim yesiShiyagalombili: Izinhlelo kumele zizisekele zona ngokwezimali futhi akufanele ngabe zizama ukuthola imali kweminye imithombo.
I-Maxim yesiShiyagalolunye: Izinhlelo kufanele zenze inzalo ekhuphukayo. Njengoba abantu abaningi beba nentshisekelo kulolu hlelo, bafuna ukufaka isandla kukho. Lokhu kusho ukuthi uhlelo luzoqhubeka nokukhula futhi lukhule lube lukhulu.
I-Maxim Yeshumi: Uhlelo lubi uma lususa ezinhlelweni esezivele zikhombisa ukuphumelela noma uma luphazamisa abantu abasebenza kwezinye izinhlelo.
I-Maxim Yeshumi Nanye: Ungalokothi usebenzise okuningi kuhlelo ukwedlula loku okungabuya ngokushesha ukubuyisele.
I-Maxim Yeshumi Nambili: Ungaqali uhlelo olusha oluvimba olunye uhlelo oluqhubekayo noma olususa kwimali yalo.
Izinhlelo kumele zisetshenzwe. Abantu abenze lolu hlelo abakwazi ukuyeka uhlelo lume. Labo abaphethe uhlelo kumele bakwazi ukubona ukuthi ngabe uhlelo lwenza izinto okufanele luzenze bese luqhubeka nazo. Kufanele futhi bakwazi ukubona ukuthi uhlelo lubi futhi bayeke ukulwenza.
Izinhlelo ziyahudula futhi zithathe isikhathi eside uma izinhlobo ezahlukahlukene zama-targets azisetshenziwe noma aziqedwanga. Bahluleka kuphela ngoba izinhlobo ezahlukahlukene zama-targets azenziwanga noma azigciniwe.
Ungenza cishe noma yini ofuna ukuyenza uma izinhlobo zama-targets ziqondwa futhi kutholakala ukuthi ziyiqiniso futhi zinokwenzeka. Ama-targets kumele aqhutshekwe engamiswa kuze kube ngayinye iyaphothulwa.
Ngokuqhubeka nokusebenza ezinhlelweni, ungavumeli ukuthi iwe noma ikhohlakale, uzokwazi ukuthi kwenziwe. Futhi ngale ndlela ungafeza ama-goals ahloselwe wena noma iqembu lakho.
Le yindlela yokwenza ukuhlela kube iqiniso nokufeza imigomo. Kuyiqiniso kumuntu ngamunye njengoba kuyilo eqenjini elikhulu. Bonke abantu bengazuza ekwazini lawa maqiniso futhi nase kuwasebenziseni lawa maqiniso.